Wararka Diyaaradaha • Arimaha Dowlada • kale • Seychelles wararka safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka
Guddiga Dalxiiska Seychelles ayaa kaqeyb galaya Aqoon Isweydaarsi Xiriirinta Safarka ee Dong Luxury
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Guddiga Dalxiiska Seychelles ayaa kaqeyb galaya Aqoon Isweydaarsi Xiriirinta Safarka ee Dong Luxury
Markii Seychelles ay dib u furatay xuduudaheeda dhammaadkii bishii Maarso, waxaan la shaqeynaynay lamaanayaasheena kala duwan suuqa Shiinaha si aan u soo dhaweyno booqdayaasha Shiinaha ee ku soo laabtay Seychelles.
Golaha Dalxiiska ee Seychelles wuxuu goobjoog ka ahaa Shirweynihii 4-aad ee Xiriirinta Safarka ee Dong Luxury ee ku yaal Shiinaha dhammaadkii Abriil.
Waxaa aasaasay 2018 by Dong, oo ah shirkad walaasheed ah oo ka tirsan 8 Qaaradaha Socdaalka, dhacdada ganacsiga ayaa diiradda lagu saaray waaxda dalxiiska raaxada ee Shiinaha.
Maaddaama Shiinuhu si tartiib tartiib ah u bilaabay inuu mar kale shaqeeyo, aqoon isweydaarsiga wuxuu abuuray fursadda ugu habboon ee dib loogula xiriiri karo duuggii hore loona la kulmi lahaa wada-hawlgalayaasha ganacsi ee raaxada cusub suuqa dhexdiisa isla markaana laga wada hadlo jidka loo marayo mustaqbalka cusub.
Golaha Dalxiiska ee Seychelles wuxuu goobjoog ka ahaa Shirweynihii 4aad ee Xiriirinta Safarka ee Xiriirka Safarka ee Dong ee Shiinaha dhammaadkii Abriil. Waxaa aasaasay 2018 by Dong, oo ah shirkad walaasheed ah oo ka tirsan 8 Qaaradaha Safarka, dhacdada ganacsiga waxay diiradda saartay waaxda dalxiiska raaxada ee Shiinaha.
Maaddaama Shiinuhu si tartiib tartiib ah u bilaabay inuu mar kale shaqeeyo, aqoon isweydaarsiga wuxuu abuuray fursadda ugu habboon ee dib loogula xiriiri karo duuggii hore loona la kulmi lahaa wada-hawlgalayaasha ganacsi ee raaxada cusub suuqa dhexdiisa isla markaana laga wada hadlo jidka loo marayo mustaqbalka cusub. Aqoon isweydaarsiga Isku xirka 2021 wuxuu goobjoog ka ahaa kaqeybqaadashada ku dhowaad 200 iibsadayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha guud ahaan Shiinaha iyo dalal kale oo ay kujiraan Seychelles.
Intii lagu gudajiray dhacdada saddexda maalmood ah, Kooxda STB waxay yeesheen 64 kulan, 39% iibsadayaal cusub iyo la-hawlgalayaal ganacsi oo suuqa dhexdiisa ah, iyaga oo cusbooneysiinaya isla markaana la wadaagaya macluumaadka ku saabsan waxa jasiiraddu u socoto ay siiso martideeda iman kara.
In kasta oo masiibada ay wax ka bedeshay adduunka safarka, safrayaasha Shiinaha kama aysan lumin jaceylkii ay u qabeen inay ka ogaadaan meelaha fog. Fasaxa Maalinta Shaqaalaha ayaa markhaati ka ahaa dalab dalxiis oo xoog leh oo dalxiis oo ka dhashay xakamaynta guusha ee faafidda iyo heerka tallaalka ee Shiinaha. Sida lagu sheegay warbixinnada rasmiga ah ee warbaahinta Shiinaha, dalxiisayaasha Shiinaha waxay sameeyeen ku dhowaad 230 milyan oo safarro ah intii lagu jiray fasaxii May ee la soo dhaafay iyada oo safarada gudaha ay ka sarreysay heerarka faafa ee ka horreeyay COVID-19.